Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2021
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Desambra, 2021
Libanona 29 Desambra 2021
Hita na aiza na aiza ary mazàna atao tsy misy fanarahamaso mifanaraka amin'ny rafitra araka ny lalàna ireo fitsabahana amin'ny fiainana manokan'ny olompirenena ao Libanona.
Hazakazaka arahin-tosika ny fihenan-tsandan'ny Lira Tiorka
Tiorkia 22 Desambra 2021
Ampirisihan'ny vondron'orinasa lehibe indrindra ao Torkia ny governemantan'i Erdoğan "hiverina any amin'ny fitsipiky ny hay toekarena."
Tiorka kintan'ny gadona pop, nahatezitra vahoaka ny fanehoankeviny tsy miraharaha ny olana ara-toekarena misy ankehitriny
Tiorkia 21 Desambra 2021
Raha ny olona milahatra be manoloana ireo kiôska fivarotana mofo, niteraka kiana maro tety anaty tambajotra ny antsafa iray natao tamina kintan'ny gadona Pop.
SMEX:Fandrahonana ho an'ny zo ankihy ny fisian'Israely ao amin'ny Expo Dubai 2020
Emirà Arabo Mitambatra 16 Desambra 2021
Tamin'ny volana Novambra, nampiditra tao anaty lisitra mainty ireo orinasa Israeliana mpanara-maso roa, NSO Group sy Candiru, izay voalaza fa namatsy rindrambaiko mpitsikilo ho an'ny UAE, Arabia Saodita, Maraoka ary Bahrain ny Departemantan'ny Varotra Amerikana.
Tiorkia 08 Desambra 2021
Niatrika bala fingotra, baomba mandatsa-dranomaso alefan'ny polisy ny vehivavy tao Torkia rehefa nanao diabe hampitsaharana ny herisetra satria lahy/vavy
Ny fitakiana voalohany dia ny hidiran'i Tiorka indray amin'ny Fifanarahana Istanbul — fifanarahana iraisam-pirenena miantoka ny fanafoanana ny herisetra an-tokantrano ary mampiroborobo ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, fifanarahana izay nialàn'i Torkia tamin'ity taona ity.